➤ Indlu yokungcakaza esembindini ene-☀SPECTACULAR TERRACE☀
I-El Ático de la Calle Mayor yindlu entle ebekwe kwisitrato esikhulu sokuthenga ePalencia kwaye isasazwe kwigumbi lokulala eli-1, igumbi lokuhlambela, ikhitshi elahlukileyo kunye negumbi lokuhlala.
I-terrace ebukekayo exhotyiswe ngokupheleleyo imile kule ndlu.
Ilungele abasebenzi abafuna indawo yokuhlala etofotofo kunye nezibini kunye neentsapho eziza kutyelela ePalencia.
Ukuba uza ngemoto, uya kufumana indawo yokupaka kawonke-wonke ngaphantsi kwemizuzu emi-3 ukusuka kwindawo yakho
Eyona nto ixabiseke kakhulu kubathengi bethu kukufumana isidlo sakusasa, isidlo sasemini, isidlo sangokuhlwa okanye ukonwabela incoko emnandi nosapho kunye nabahlobo kwindawo entle engaphandle efikelelekayo kwigumbi lokuhlala.
Enye ingcaciso enomdla yinzolo oya kuyonwabela kwigumbi ukusukela nokuba kwi-artery enkulu yorhwebo yasePalencia kwaye usondele kakhulu kwizikhumbuzo eziphambili awuyi kuba neengxaki zokuphumla xa ubeka igumbi ngaphakathi kwindlu ekhuselweyo kwingxolo evela Isitalato.
Indlu ibekwe kumbindi wedolophu, iimitha ezimbalwa ukusuka kwizikhumbuzo eziphambili kwaye ijikelezwe ezona venkile zibalulekileyo, imivalo kunye neendawo zokutyela kwisixeko.
Unendawo yokupaka kawonke-wonke nje imizuzu emi-3 ukusuka kumnyango wendawo yokuhlala kwaye ukuba uza ngololiwe okanye ngebhasi unokuba kwindawo yakho yokuhlala ngaphantsi kwemizuzu eli-15 ngeenyawo.
Indawo ebumelwaneni iyaphithizela kodwa ikhuselekile kwaye ungayonwabela umoya wesixeko nje ngokuhla uye esitratweni.
Le ndlu ayifuni ukuziswa ubuso ngobuso, nangona kunjalo sinakho iiyure ezingama-24 ngosuku kumnxeba woncedo esiwunikezayo xa ubhukisha.